Soomaaliland iyo Taiwan oo Heshiis kala Saxiixday – GOBOLADA.COM
May 25, 2022 May 25, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Soomaaliland iyo Taiwan oo Heshiis kala Saxiixday
Somaliland iyo Taiwan ayaa kala saxiixxday heshiis iskaashi oo ku saabsan Shidaalka iyo Macdanta.
Heshiiska laba geesoodka ee ay Somaliland iyo Taiwan wada galeen ayaa ah mid lagu tirakoobayo xaddiga macdanta iyo shidaalka ah ee ku jira Somaliland, in la dhiso bangi lagu kaydiyo macluumaadka macdanta iyo caawimooyin kale oo ay Taiwan ka siinayso Somaliland ka faa’iidaysiga khayraadka dabiiciga ah.
“Labada dowladood waxay ku heshiiyeen in la oggaado macdanta ku jirta Jamhuuriyadda Somaliland nooceeda, caddadkeeda, meelaha ay ku jirto iyo qiimaha ay lacag ahaan ku fadhido. In la inoo sameeyo bangi macluumaadka iyo xogta macdanta iyo tamarta aan ku kaydino oo casri ah ama digital ah” ayaa lagu yidhi qoraal uu baahiyay wakiilka Somaliland ee Taiwan Maxamed Xaaji.
Waxaa kale oo ay labada dhinac ku heshiiyeen in Somaliland loo fududeeyo ka faa’iidaysiga khayraadka dabiiciga ah iyo in la wajaho caqabad kasta oo ka hor imanaysa, iyo in kor loo qaado oo la taageero sidii Somaliland uga faa’iidaysan lahayd macdanta iyo shidaalka.
Heshiiska waxaa qalinka ku duugay dhanka Somaliland Wasiirka wasaaradda Tamarta iyo Macdanta Cabdullaahi Faarax Cabdi, halka Taiwan uu heshiiska u saxiixay wasiirka arrimaha dhaqaalaha Taiwan Allen Lou.
Mas’uuliyiinta Somaliland waxay Taiwan u sheegeen iney fursado waaweyn oo uu shidaalka ka mid yahay ay Somaliland ka jiraan, maamulkuna diyaar u yahay soo saarista iyo iib geynta shidaalkaasi.
Wadahadallada iyo xiriirka dhexmaray labada dhinac waxa ay welwel badan ku abuurtay dowladda Shiinaha oo jawaab kulul ka soo saartay wefti booqasho ku tagay Taiwan iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha Zhao Lijian, ayaa sheegay in dunida laga aqoonsan yahay hal dal oo la yiraahdo Shiinaha, Taiwan-na ay tahay qayb aan laga maarmi karin oo ka tirsan Shiinaha, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP.
Zhao Lijian waxa uu sheegay in Taiwan ay “isku dayday in ay raadiso gooni-u-goosad balse ay sidoo kale hurinayso olol si ay u wiiqdo madaxbannaanida iyo midnimada dalalka kale”
Somaliland oo dhegaha ka fureysatay dhawaaqyada ka soo yeeraya Shiinaha iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wasiirka arrimaha dibedda waxa uu soo bandhigay fursadaha maal-gashi ee ay dowladda Taiwan ka sameyn karto Somaliland.
Xiisad ka Taagan degmada Waajid ee gobolka bakool
June 11, 2022 June 11, 2022 Abdukadir